Biko rịba ama: ihe ndekọ Covid-19 Janet Ossebaard (Ninefornews) bụ ọnyà akụkọ ụgha: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 23 March 2020	• 9 Comments
isi mmalite: jikọtara.nl
Onye Covid-19 Janet Ossebeard (akuku okirikiri, Ninefornews) akwụkwọ nyocha coronavirus (lee anya n'okpuru) bụ ọnyà. You ga-akpachara anya na IBM's Deep Blue supercomputer al na 1996 nke onye n’egwuregwu ụwa Kasparov ya na chess na Google Alphabet's Quantum Computer na 2016 onye mmeri ụwa nke egwuregwu kachasị dị egwu. Gaa jie ịkụ aka. Na mgbakwunye, ị kwesịrị ịmara na ụlọ ọrụ mgbasa ozi nwere ike ịmalite ihe niile, tinyere ihe niile (gụnyere usoro izu nzuzo) n'onwe ha.
Ha nwere ike ijikọ ihe niile dịka ihe nkiri ma mee ka ị chee na ọ bụ akụkọ n'ezie, ka ndị na-enweta akụkọ adịgboroja dịka NuCheck.nl wee nwee ike kpọọ ya ọkụ ma emesịa. Site na nchịkọta data buru ibu taa, ndị isi ụwa maara ka esi egwu egwu ruo n'ọtụtụ ebe ezubere obere micro.
Ihe dị nkọ banyere ihe ndị a niile bụ na enwere eziokwu dị na eziokwu ahụ bụ na etinyere akụkọ adịgboroja nke onwe, mana n'ihi na ndị mmadụ mechara mepụta “ihe akaebe” na akụkọ ụgha, ha nwere ike tufuo nwatakịrị ahụ na mmiri ịsa ahụ.
Ọ ga-amasị m ikwusara gị nke a ma dụọ gị ọdụ ka ị gụọ ma kesaa akwụkwọ m n'ezie. Onweghị onye ga-egosi gị usoro nke mmegide na-achịkwa. Ọ bụghị Ninefornews, ọ bụghị chọrọToKnow, ọ bụghị Jensen, ọ bụghị Niburu, ọ bụghị Infowars. Nke ahụ bụ n'ihi na ha bụ akara ikpeazụ. Emela ihe ubi n’ime ya! Na isiokwu a na akwụkwọ m akọwapụtara usoro atụmatụ mmegide a na-achịkwa n'ụzọ zuru ezu.
Gee ntị ebe a maka ọmụmaatụ nke usoro ikpeazụ: voorbeeld
Na post a site na metro.co.uk lee otu a ga - esi gosipụta vidiyo ahụ Janet Ossebaard ga - edepụta dị ka akụkọ adịgboroja.
Ngbaghara m, achọghị m ịbụ onye ụjọ na ọgụgụ isi, mana m kwụsịrị ọrụ m ihe karịrị afọ asaa gara aga n'ihi okwu ụgha dị na mgbasa ozi were m iwe. N’oge ahụ, dịka ọmụmaatụ, m kwenyere na Alex Jones ‘Infowars wee banye na eriri mgbasa ozi ọzọ. Ya mere enwere m ike isi n’ime ahụ mata na ha niile enweghị nnukwu obi ụtọ na ọbọgwụ a na-adịghị ahụkebe na bekee (lee nkọwa).
Dị nkọ ma adabaghị maka ụgbụ nchekwa na ndị agha egwurugwu na-achịkwa (lee akwụkwọ m maka nkọwapụta ọzọ, agbanyeghị ọ kachasị usoro a).
N’oge na-adịbeghị anya, e ziterela m ọtụtụ vidiyo ka ọ mata m ma mee ka m tinye post nke ụdị ozi a nwere ike ịkpọ akụkọ ụgha; ike ịbụ na iji nwaa saịtị m. Ya mere, ị ga-elerịrị anya ma legide anya. N'akwụkwọ m, akọwaara m otu esi aga naanị ezi ihe ọmụma dị na (nke mbụ) na otu anyị nwere ike isi merie usoro nje a.
"Thezọ kachasị mma iji chịkwaa mmegide bụ idu ya n'onwe gị", Vladimir Lenin
Ihe ndekọ njikọ njikọ: destentor.nl, ninefornews.nl, wikipedia.org bbc.com
Ihe mere Ole Dammegard ji bụrụ ihe dị ukwuu na mgbasa ozi ọzọ
Ihe mere anyi ji adanye n'ime netiwu 911 site na ndi mmadu dika George van Houts
Tags: ọzọ, mmiri ịsa ahụ, saịtị ịgba izu, nkwekọrịta nkwekọrịta, nkwekọrịta aghụghọ, achịkwa, coronavirus, Covid-19, akwụkwọ, adịgboroja, agba, Janet, ụdị, etiti, ozi ọma, ozi ọma, itoolu, onye na-emegide ya, Akpụ afụ ọnụ, valcabal.nl, valstrik
Dịka ọmụmaatụ, ikwere na Robert Jensen bụ ezigbo mmegide? Ọ na-eme ezigbo vidiyo! Studnye ka i chere na ọ na-egoro ego iji gosi ihe ngosi ya? Nke nke (General Dutch Press Agency) John de Mol ikekwe?
Ghazie n'ezie… ụgbụ nchekwa: akara ikpeazụ
Ejiri kpochapu kpochapu ha ka ha wee tuo ndi ihe nchekwa juru - ya na ndi n’eso ya na ndi ozo - n’ime oku oku.
Ntugharị mgbanwe ahụ esighi n'aka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị n'azụ igwefoto! Nke ahụ na - eme ka ị nọrọ na nro na ha ga - ahaziri gị ya. Ntughari REAL na-amalite site na ịgbalite onwe gị!
Kedu otu esi agwa ndị mmadụ okwu dịka ha na-ele Teletubbies. Sesame Street!… Pffff kwụsịrị ịgwakọta eziokwu a na nzuzu! "Kabal," "Onye nzọpụta," "Q" ("dị mma maka gị"), na ndị ọzọ nke ụdị nche ihe nchekwa ahụ.
Madam na-akwalite echiche ndị komunizim na nzuzo!
Trump abụghị onye nzọpụta! A na-ahazi usoro nrụpụta ego aha ya bụ 'akuku ihe ọkụkụ' Madam n'ụzọ ziri ezi ma na-ewebata ya site na ihe na-apụta ugbu a n'okpuru anya gị, ya na Trump na klọọkụ. Okpokoro ụzọ a ga-esi kwupụta ọchịchị kọntinenti (ọchịchị aka ike) “Nzoputa steeti” ..n'ihi Jannet Ossebaard kwalitere ya. Teknụzụ teknụzụ: teknụzụ na-achịkwa..AI so..big data: udịdị China nke komunizim na-ahụ maka teknụzụ! Ndi ogbe nwanne ndi mmadu! Nke a bụ ihe nwanyị a na-akwalite!
Hey John de Mol: Diewertje Blok gaara abụ nhọrọ ka mma maka atụmatụ nchekwa a….
(isi mmalite: Libelle)
Rịba ama (9:30 min.): "Ọ bụrụ na a na - egbochi mkpesa nke ndị na - elekọta mmadụ, atụla ụjọ n'ihi na agbachitere Defender 2020 iji jide gọọmentị rụrụ arụ"
Onweghi ‘akuku akuku’… a ga - eji ya mee ka ndi mmadu ghara ikwurita ibe ha okwu, ka o ghara inupụ isi na mkpọrọ ikpeazụ ya.
Shill Micha Kat na-akwado otu akụkọ netwọkụ nchekwa data Q Anon
Ara nzuzu. Agụọla ajụjụ ndị dị n'okpuru ebe a, ha na-akụ nko, ahịrị na sink. N’ezie ha gha acho ikwenye ozi oma.
Nnukwu nwanne ga-azoputa anyi n’aka ndi ojoo, huru nnukwu nwanne, tụkwasakwa nnukwu nwanne obi, tukwasi Trump obi, tukwasi ndi agha obi. Ọchịchị ịhụnanya nke ụwa na udo ga-adị ọhụrụ
Ha ga-eteta n'ụjọ mgbe oke akala.
Na US, ị nwekwara ugbu a ụdị onye ara na-ezisa ụdị ozi a. The sasquatch ga-azoputa anyị, ndị ala ọzọ ga-azọpụta anyị, Trump ga-azọpụta anyị, ndị agha ga-azọpụta anyị.
Ọtụtụ mmeghachi omume lyrical n'okpuru vidiyo a (covid19 akụkụ 3). Legodị akụkọ ụfọdụ mere ihe ndị a kwuru. Imirikiti nwere banyere otu vidiyo youtube na otu ndị debanyere aha 1 ma ọ bụ abụọ. Ihe ndekọ YouTube dị egwu dị ka akụkọ adịgboroja ma ọ bụ nke mmadụ ole na ole mepụtara
Ọ juputara na akụkọ adịgboroja, akaụntụ ụgha dị omimi na boi AI nke na-aza mgbasa ozi mgbasa ozi. Gaghị enwe ike ịnabata nzaghachi nye ụzọ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ nke ọma ma leghaara ha anya.
Bọọrọ ụmụ aka!
" 'Bill Gates' countum dots 'kaadị ID nke na-eme ka a mara ma ị nwere coronavirus ma ma ọ̀ gbara gị ọgwụ
Mmelite mkpọchi Coronavirus covid-19: Mgbe iteta n'ụra wee mata na ọnye gị dị, gịnị ka ị ga - eme? »
Nleta nile: 1.347.159
Martin Vrijland op Trump, Q-Anon na 'nhicha akụkọ ifo dị omimi' (Robert Jensen, Janet Ossebaard)
Future op 'Ndapu nke cabal' ihe nzuzu na ndi bu 'Q Anon' Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers)?
Peter Steegmans op Trump, Q-Anon na 'nhicha akụkọ ifo dị omimi' (Robert Jensen, Janet Ossebaard)